Fitrandrahana harena an-kibon’ny tany : Ireo mpijirika no tena betsaka -
AccueilRaharaham-pirenenaFitrandrahana harena an-kibon’ny tany : Ireo mpijirika no tena betsaka
02/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanambara ampahibemaso ny zava-misy mikasika ny tontolon’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany eto amin’ny firenena ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny fihaonany tamin’ireo mpandraharaha sy ireo manam-pahefana samihafa izay voakasik’izany, omaly teny Mandrosoa Ivato. Nilaza izy araka izany fa 90% an’ireo mangataka taratasy fahazoana alalana hitrandraka dia mpijirika avokoa. Izany hoe, vidiany amin’ny endriny “brut” ilay entana ary amidiny indray avy eo, raha toa ka tokony izy tompony no hanao ny fanodinana. Ny firenena anefa dia mila olona miasa sy mandray anjara amin’ny fampandrosoana azy, ary ny sehatry ny fitrandrahana harena ambanin’ny tany dia manana ny anjara toerana lehibe eo amin’izay lafiny izay. Araka izany, dia hisy ny fandraisana fepetra manoloana izany, ny taratasy fahazoan-dalana hitrandraka tokoa mantsy dia tsy natao omena ny olon-drehetra fa ho an’izay tena vonona ny hitrandraka ka hampandroso ny firenena marina.
“Taratry ny fomba fijerintsika izay hampandrosoana ny firenena, ary mila olona mitraka, manana foto-kevitra, mitsinjo lavitra, moderina ny firenena ka tsy ho mena-mitaha amin’ny zava-misy any ivelany”, raha araka ny fanazavan’ny Filoha. Midika izany fa rehefa vonona handroso sy mahay mandamina ny fomba fiasa ny vahoaka Malagasy dia mahavita zavatra. Ao ihany koa ny fisian’ny ivon-toerana tokana na ny “Guichet unique” izay hita any amin’ny ivon-toerana ho an’ny fandraharahana ny harena an-kibon’ny tany na ny Mining Business Center eny Mandrosoa Ivato. Tsy nataotao foana akory ny fametrahana izany ivon-toerana izany eny Ivato, fa raha araka ny fanazavana hatrany dia eny tokoa no ambohi-pihaonan’ny mpandraharaha samihafa avy any amin’ny lafy valon’ny Nosy, avy any amin’ny vazantany efatra, amin’ny alalan’ny seranam-piaramanidina. Ka anisan’ny paikady iantsoana ireo mpitsidika, ireo mpamatsy vola, sy ny maro hafa ahafahantarana an’i Madagasikara eo amin’ny sehatry ny harena ananany izany. Ankoatra izay paikady entina mandresy lahatra ihany koa izany, satria mampiseho tokoa fa manan-karena ny nosintsika, ary zavatra tsy azo eritreretina ny hatsaran’ny harena misy etoana. Anjarantsika ny mampahafantatra ny firenentsika …, hoy hatrany ny fanazavana nentin’ny Filoham-pirenena.
Firenena manankerena indray aorian’i Etazonia. Efa ho 45 taona izay ny fiaraha-miasa teo amin’i Madagasikara sy ny repoblika entim-bahoakan’i Sina. Mbola mitohy izany fiaraha-miasa izany ary vao maika aza miroborobo amin’ny sehatra samihafa. Maro ireo ...Tohiny